Tantara: Ireo Noﬁn’i Farao - Tranonkala Ofisialin’ny Vavolombelon’i Jehovah
LASA ny roa taona, ary mbola ao an-tranomaizina ihany i Josefa. Tsy nahatsiaro azy ilay mpitondra kapoaka. Indray andro àry dia nanana nofy roa niavaka i Farao, ary nanontany tena ny amin’ny hevitr’izany izy. Hitanao ve izy eto matory? Ny ampitso maraina dia nampiantsoin’i Farao ny olon-kendriny ary nolazainy azy ireo zavatra nonoﬁsiny. Nefa tsy afaka nanambara taminy ny hevitry ny noﬁny izy ireo.
Mba tsaroan’ilay mpitondra kapoaka ihany i Josefa tamin’ny farany. Hoy izy tamin’i Farao: ‘Fony aho tao an-tranomaizina dia nisy lehilahy afaka nanambara ny hevitry ny nofy tao.’ Nampanalain’i Farao avy tao an-tranomaizina avy hatrany i Josefa. Nambaran’i Farao tamin’i Josefa ny noﬁny: ‘Nahita ombivavy ﬁto matavy sy tsara tarehy aho. Avy eo dia nahita ombivavy ﬁto tena mahia sy ratsy tarehy aho. Ary ny ombivavy ﬁto mahia dia nitelina an’ireo matavy.’
‘Tao amin’ny noﬁko faharoa dia nahita salohim-bary ﬁto vokatra sy masaka naniry tamin’ny tahony iray aho. Avy eo dia nahita salohim-bary ﬁto malazo sy maivam-boa aho. Dia nanomboka nitelina ny salohim-bary ﬁto tsara ny salohim-bary malazo.’
Hoy i Josefa tamin’i Farao: ‘Zavatra iray ihany ny hevitry ny nofy roa. Ny ombivavy ﬁto matavy sy ny salohim-bary ﬁto vokatra dia ﬁto taona, ary ny ombivavy ﬁto mahia sy ny salohim-bary ﬁto malazo dia ﬁto taona hafa koa. Hisy ﬁto taona hanirian’ny sakafo be dia be eto Ejipta. Avy eo dia hisy ﬁto taona izay tsy hanirian’ny sakafo afa-tsy kely dia kely.’
Hoy àry i Josefa tamin’i Farao: ‘Miﬁdiana lehilahy hendry iray ary ampiandraiketo ny fanangonana sakafo izy mandritra ny ﬁto taona tsara. Dia tsy ho mosarena ny vahoaka mandritra ny ﬁto taona ratsy manaraka rehefa ho sakafo kely dia kely no haniny.’
Nankasitrahan’i Farao ilay hevitra. Ary dia niﬁdy an’i Josefa izy mba hanangona ny sakafo sy hitahiry azy. Tonga ny olona nalaza indrindra tany Ejipta i Josefa, nanarakaraka an’i Farao.
Valo taona tatỳ aoriana, nandritra ny mosary, dia nahita lehilahy vitsivitsy tonga teo aminy i Josefa. Fantatrao ve hoe iza izy ireo? Ny zokin’i Josefa folo mirahalahy izany! Nirahin’i Jakoba rainy ho any Ejipta izy ireo satria lany sakafo izy ireo tany Kanana. Fantatr’i Josefa ny rahalahiny fa izy ireo tsy nahafantatra azy. Fantatrao ve hoe nahoana? Satria efa nihalehibe i Josefa ary nanao karazan’akanjo hafa.
Tsaroan’i Josefa fa fony zazalahy izy dia nanonofy momba ireo rahalahiny tonga niondrika teo anatrehany. Tsaroanao ve fa efa namaky izany ianao? Koa dia hitan’i Josefa fa Andriamanitra no naniraka azy ho any Ejipta, ary noho ny antony tsara. Inona izao no heverinao fa hataon’i Josefa? Aoka hojerentsika.
Genesisy 41:1-57; 42:1-8; 50:20.
Inona no nanjo an’i Farao indray alina?
Inona no nahatonga ilay mpitondra kapoaka hahatsiaro an’i Josefa ihany tamin’ny farany?
Inona ireo nofy roan’i Farao, hita eo amin’ny sary?
Inona no nolazain’i Josefa fa dikan’ireo nofy ireo?
Nahoana i Josefa no lasa ny olo-malaza indrindra tany Ejipta, nanarakaraka an’i Farao?
Nahoana ny rahalahin’i Josefa no tonga tany Ejipta, ary nahoana izy ireo no tsy nahalala azy?
Inona ilay nofy tsaroan’i Josefa, ary inona no lasa nazava taminy, noho izany?
Vakio ny Genesisy 41:1-57.
Ahoana no nisarihan’i Josefa ny sain’ny olona ho amin’i Jehovah, ary ahoana no azon’ny Kristianina anahafana azy? (Gen. 41:16, 25, 28; Matio 5:16; 1 Pet. 2:12)
Nahoana ny toe-javatra misy ny vahoakan’i Jehovah no toy ireo taona nahazoam-bokatra be tany Ejipta, fa toy ilay mosary kosa ny zava-misy eo anivon’ny Kristianisma Anarana? (Gen. 41:29, 30; Amosa 8:11, 12)
Vakio ny Genesisy 42:1-8 ary 50:20.
Fanaon’ny olona any amin’ny faritra sasany ny miankohoka amin’ny olona ambony, mba hanomezam-boninahitra sy hanajana azy. Mety amin’ny mpanompon’i Jehovah ve ny manao izany? (Gen. 42:6)
Namonjy Olona Be dia Be i Josefa
Vakio ny tantaran’i Josefa, izay nampiasain’Andriamanitra hamonjy olona be dia be. Vakio ato ity tantara an-tsary ity na ataovy pirinty ny PDF.